FJKM Ambohimamory – FJKM Ambohimamory
FIANGONAN’I JESOA KRISTY ETO MADAGASIKARA – SYNODAMPARITANY ANTANANARIVO ANDREFANA
AMBOHIMAMORY MALALA ORIMBATO – BP 5165 Tél. +261 34 61 755 13 – +261 34 64 850 05
MVOLA : +261 34 66 618 50 (Fandraisana anjara amin’ny fanitarana ny fiangonana)
Ry havana, Ho aminareo mandrakariva anie ny Tompo Jesoa. Am-pifaliana sy am-pitiavana tanteraka no iarahabana sy irariana ny soa sy ny tsara indrindra ho anareo rehetra avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompo amin’ny firaisana amin’ny Fanahy Masina. Tapaka nandritra ny taona vitsivitsy maromaro ny fifaneraseran’ny vahoakan’Andriamanitra sy ireo havana aman-tsakiza teto amin’ny FJKM Ambohimamory Malala Orimbato, S/P.A.A.10 tamin’ny alalan’izao Site Web izao, noho ny antony tsy nahafaha-nanoatra. Isaorana anefa Jesoa Kristy Tompo, Ilay Tompon’ny fanapahana farany, fa afaka notohizana indray izany fifaneraserantsika izany ankehitriny. Koa dia amin’ny FIFALIANA LEHIBE no anolorana antsika indray izao fitaovan-tserasera izao; mba hahafahantsika mifampizara sy mampita vaovao hanamafy orina hatrany ny FINOANA sy ny FIFANKATIAVANA eo amin’ny samy Zanak’Andriamanitra. Eto am-pamaranana dia tsy hay ny tsy hisaotra sy hankasitraka ireo mpanompon’Andriamanitra rehetra; nitoto naha-fotsy, nahandro naha-masaka, nanao ny ainy tsy ho zavatra, nitady ny fomba rehetra, nampiasa tetika maro samihafa mba hahafahan’izao Site Web izao miasa indray, hanompoana an’Andriamanitra sy hanehoana ny voninahiny. Jesoa Kristy Tompontsika anie hamaly fitia anareo rehetra. Hamafisina etoana ihany koa fa fitaovan’ny Fiangonana izy ity. Araka izany, ny fampiasana azy dia mikendry mandrakariva ny fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra, sady mitandro ny fahamasinan’ny Fiangonana; izay efa novidian’I Jesoa Kristy lafo tamin’ny ràny teo amin’ny Hazo Fijaliana. Homba antsika rehetra anie Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. RANDRIAMANANTENASOA Martin, Mpitandrina
Fampianarana ho an’ny tanora
Ary mifalia eo anatrehan' i Jehovah Andriamanitrao ianao, dia ianao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy, ary ny mpanomponao lahy sy ny mpanomponao vavy, ary ny Levita izay eo am-bavahadinao mbamin' ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondratena izay eo aminao, dia eo amin' ny toerana izay hofidin' i Jehovah Andriamanitrao hampitoerana ny anarany.
Vita soa amantsara ny fankalazana ny alahadin'ny Mpitandrina RANDRIAMANATENASOA Martin ny alahady 01/12/2019 maraina teo . Ny maraina dia fanompoam-pivavahana ho fitondrana am-bavaka ny Mpitandrina mianakavy ary ny hariva kosa dia nisy ny sakafom-pifaliana izay niarahan'ny Mpitandrina mianakavy sy ireo olom-boafidy rehetra teto amin'ny Fiangoanana .
Ivon’ny fankalazana ny faha 150 taonan’ny Fiangonana
"Indro, havaoziko ny zavatra rehetra." Apok. 21/5b
IVON-JOBILY FAHA 150T FJKM AMO Amin’ny Alahady 11 aogositra 2019 no hankalazana an’Andriamanitra noho ny fahatrarana ny Ivonjobily faha 150T FJKM AMO. Hisy tranoheva (Exposition) hanehoan’ireo Hery velona rehetra izay misy sy mijoro eto amin’ny Fitandremana : Sampana, Fikambanana, Asa, ny tantarany nandritra izay 150T izay. Manomboka ny Sabotsy 03 sy Alahady 04 aogositra 2019. Mitohy ny Sabotsy 10 sy Alahady 11 aogositra 2019 eo amin’ny Tokotany Sekoly FJKM Ambohimamory ihany. Toy ny fanao isan-taona dia ny Alahady 11 aogositra 2019 no Alahady Taranaka sy ny Zanaka Ampielezana ety an-tanindrazana. Efa afaka misoratra anarana dieny izao ny isam-pianakaviana ary mandray ny Valopim-pahasoavana ao amin’ny Mpandraharaha Fiangonana.
«Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa hangina.»«Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa hangina.»«Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa hangina.»«Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa hangina.»«Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa hangina.»«Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa hangina.»«Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa hangina.»«Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa hangina.» Ny Baiboly
Ry Ambohimamory malala
Havaozy ry Tompo – hira faneva 150t
Haleluia Haendel – FEFI
Izaho ilay zanany – ANTSAFI
Jobily faha-150 taonan’ny Fiangonana FJKM
Ambohimamory Malala Orimbato
» Indro havaoziko ny zavatra rehetra. «